जुम्लिया दिदि बहिनिसंग लुँडो खेलेर दिन काट्दै सक्किगोनिका ‘बले’ ! «
जुम्लिया दिदि बहिनिसंग लुँडो खेलेर दिन काट्दै सक्किगोनिका ‘बले’ !
Published : 13 April, 2020 2:21 pm
लकडाउन सुरु हुनुभन्दा केही दिन अगाडिदेखि नै सागर लम्साल ‘बले’ फुर्सदिला बनिसकेका थिए । म्युजिक भिडियो तथा सिरियलको छायांकन रोकिएपछि उनले फुर्सद पाएका हुन् । लकडाउनपछि त झन् घरभित्रै थुनिएर बस्नुको विकल्प रहेन । आमा र बहिनीको साथ उनी कालोपुलमा बस्दै आएका छन् । सागर बिहान केही ढिलासम्म सुत्छन् । उठेर आधा घण्टाको मेडिटेसन र पेटको लागि व्यायाम गर्छन् । अनि नुहाउँदा खाना खाने समय भइसक्छ । सागरले भने, ‘मेडिटेसन र व्यायाम नगरेको चाहीँ दिन नै हुन्न । व्यायम गरेर नुहाएपछि मात्र मेरो दिन सुरु हुन्छ ।’
खाना खाएर आफ्नो कोठा छिरेपछि सागरले गर्ने क्रियाकलापहरु धेरै छन् । कहिले चलचित्र हेर्छन् । कहिले पुस्तक पढ्छन् त कहिले युट्युबमा भुलिन्छन् । ‘मैले यस्तो गर्छु भन्ने नै छैन । चलचित्र पनि हेरिरहेको हुन्छु, पुस्तक पनि पढ्छु, युट्युब र टिकटक पनि हेरिरहेको हुन्छ,’ उनले सुनाए । उनी दक्षिण भारतिय चलचित्र खुबै हेर्ने गर्छन् । यूट्यूवमा उपलब्ध उनले नहेरेका साउथ इन्डियन चलचित्र कमै बाँकी होलान् । पुस्तकमा चाहिँ ‘महको म’ पढिरहेका छन् ।
यी सबै कुराबाट पनि झ्याउ लाग्यो भने सागरलाई फ्रेस गराउने अर्को विकल्प छ, लुडो । सागर अनलाइन लुडो खेल्न माहिर छन् । झ्याउ लाग्यो कि आफ्नो टिम ‘इन्भाइट’ गर्छन् र लुडो सुरु गर्छन् । सागरसँग लुडो खेल्ने टीम टिकटकबाट भाइरल भएका ट्विनी गर्ल प्रिज्मा–प्रिन्सी र मन्जिल बस्नेत हुन् । सागर भन्छन्, ‘लुडो खेल्ने मेरो टीम नै उनीहरु हुन् ।’
(त्यसो त प्रिज्मासँग सागर लुँडो मात्रै होइन, मायाको खेल पनि खेलिरकेका छन् भन्ने चर्चा ब्यापक चलिरहेकै छ ।) सागर यो लकडाउनमा बन्द भएर बस्दा आफ्नो कामलाई निकै मिस गरिरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले मिस हुने भनेको नै मेरो काम हो । दैनिक काम गर्नेहरुलाई यसरी चुप लागेर बस्न त गाह्रो हुने रहेछ ।’
कोरोनाको कारण सागरको धेरै कामलाई असर गरेको छ । ‘मेरो ३ वटा भिडियो रिलिजको लागि तयार थिए, त्यो रिलिज हुन पाएन’, सागर भन्छन्, ‘४ वटा भिडियोको सेड्युल बनिसकेको थियो त्यो पनि रोकियो ।’